Ngaphandle Kwesikrini: IBlockchain Izokuthinta Kanjani Ukuthengisa Okuthonya | Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 10, 2021 NgoMgqibelo, Ephreli 10, 2021 UMat Dyer
Ngenkathi uTim Berners-Lee esungula iWorld Wide Web eminyakeni engamashumi amathathu edlule, wayengeke abone kusengaphambili ukuthi i-Intanethi izophenduka ibe yinto evamile namuhla, iguqule indlela umhlaba osebenza ngayo kuyo yonke imikhakha yempilo. Ngaphambi kwe-Intanethi, izingane zazifisa ukuba ngosomkhathi noma odokotela, nesihloko somsebenzi se- umthelela or umqambi wokuqukethwe zazingekho nje. Shesha phambili namuhla futhi cishe amaphesenti we-30 yezingane ezineminyaka eyisishiyagalombili kuya kweleshumi nambili zinethemba lokuba yi-YouTuber. Imihlaba ihlukene, akunjalo?
Imithombo yezokuxhumana ngokungangabazeki ikhuthaze ukwanda kwezulu lokumaketha okuthonya nemikhiqizo esetshenziselwe ukuchitha kuze kube US $ 15 billion ngo-2022 kulokhu kubambisana kokuqukethwe. Imakethe iphindaphindwe kabili ngenani kusukela ngo-2019, okukhombisa amandla embonini yezokuthengisa ethonya imali eyizigidigidi. Noma ngabe kuvumela into yokunethezeka efiswa kakhulu noma igajethi yakamuva, abagqugquzeli sebephendukele ekuthengisweni kwemikhiqizo eminingi efuna ukufinyelela, ukuzibandakanya nokuheha izethameli eziqondiswe kubo.
Ukulawula Umdlalo Wokwenza Imali, Ukuba Nobunikazi Bakho
Ukuthandwa kokukhangisa okunomthelela akunasizathu. Ngo-2020 kuphela, sabona inkanyezi yakwa-YouTube ekhokhelwa kakhulu ithola isamba semali esingama-US $ 29.5 million, nabadali bokuqukethwe abayishumi abadonsa amaholo angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyishumi zamaRandi. UKim Kardashian, ngokwesibonelo, uthengise amakha akhe emizuzwini engemuva ngemuva kokuba ababukeli abayizigidi eziyi-10 bezitholele yena bukhoma, kuyilapho abagqugquzeli beTikTok bethule imikhiqizo kanye nemikhiqizo enamashadi wokuthandwa. Leyo yindaba yabafaka ohlwini lwe-A noma labo abakwazile ukungena endaweni yesehlakalo, bathola ukuthandwa nempumelelo ngezethameli zabo.
Kodwa-ke, kunolunye uhlangothi ekulandiseni okuthonya okuvame ukunganakwa phakathi kwe-hype kanye ne-buzz yethonya lakamuva futhi elishisayo. Kokunye, amandla we-platform-influencer Dynamics angahle adumaze abadlali abasha noma be-niche. Izithiyo eziphakeme ze-YouTube zokwenza imali zifika engqondweni - ukufinyelela kwimali engenayo yokukhangisa kugcinelwe kuphela abadali asebevele baqoqa izithameli ezingaphezu kuka-1,000 XNUMX ngenkathi umdali ojwayelekile ehola nje $ 3 to $ 5 per 1,000 video views. Isamba esincanyana embonini enenzuzo enjalo. Bese kuba khona labo baxhashazwa ngemikhiqizo - noma ngabe kuwukuntshontsha izithombe, ukubhala izinkontileka ezingekho emthethweni, ukungakhokhi, noma ukuthonya okuphoqelela ukusebenza mahhala. Kusukela ekudalweni kokuqukethwe kuya ekwakhiweni kokuqukethwe, abagqugquzeli bavame ukuthatha umthwalo womkhankaso wonke, futhi kufanele banxeshezelwe ngomsebenzi wabo.
Ekufuneni ukudala umnotho onomthelela omuhle, ke abadali bokuqukethwe bangazenzela kanjani ngokuzimela umkhiqizo wabo ngenkathi beqinisekisa ukuthi nabo bayazifeza izithembiso zabo?
IBlockchain kungaba yindlela eyodwa yokwenza lokhu.
Ukusetshenziswa okunjalo kwe-blockchain wukwenza amathokheni - inqubo yokukhipha ithokheni ye-blockchain engamela ngokwamanani ubunikazi noma ukubamba iqhaza kwimpahla yangempela ethengiswayo. Amathokheni kukhulunywe ngawo kakhulu ezinyangeni ezedlule, kulandela amacala okusetshenziswa ezimbonini eziningi ezithinta ezemidlalo, ezobuciko, ezezimali kanye nezokuzijabulisa. Eqinisweni, muva nje kusanda kuvela ukuvela kwayo ezinkundleni zokuxhumana ngokwethulwa kwe- I-BitClout, ipulatifomu enikwe amandla yi-blockchain evumela abantu ukuthi bathenge futhi bathengise amathokheni abamele ubunikazi babo.
Ngendlela efanayo, abadali bokuqukethwe bangathola ukulawula okukhulu, ukuzimela, kanye nobunikazi bomkhiqizo wabo ngokwethula ithokheni labo lendabuko - noma ngabe ukuzenza amathokheni noma imibono yabo - nokwenza imali kangcono ngokuqukethwe nomkhiqizo wabo ngaphandle kokuncika kuphela kumali engenayo yokukhangisa evela ku- ipulatifomu.
Inikwe amandla yi-blockchain, ukusetshenziswa kwezinkontileka ezihlakaniphile kungasiza nabathonya ukuthi kuqinisekiswe ukuthi ukukhokha okufika ngesikhathi kwenziwa ngemuva kokuba umkhankaso ngamunye usuphothuliwe. Izinkontileka ezi-Smart zifakwe ikhodi enemibandela evunyelwene ngayo engasethwa yibo bobabili abakhiqizi nabathonya. Lapho isivumelwano sesifinyelelwe, izimali zingadluliselwa ngokuzenzakalela ngaphandle kwe-red tape yomuntu wesithathu ekubambezeleni inqubo.
Inani Lokushayela Ngokucacile
Njengoba umhlaba ususa amagiya, imboni yezentengiso nayo iyashintsha. Ama-Brands abelokhu esebenzisa izabelomali zezikhangiso zamafomu amaningi edijithali wokukhangisa ukuze afinyelele izethameli ezihambise kancane izimpilo zazo online. Ngenkathi ukumaketha okunomthelela kungaba yindlela yesikhashana, izinhlobo eziningi azibonanga ngaso sonke isikhathi ukuhlangana okuqondile phakathi kokumaketha okususelwa kwabathonya kanye nokuphakama kokuthengisa, okushiya abakhangisi bengabaza ithonya lalaba badali bokuqukethwe.
Lokhu kunjalo ikakhulukazi lapho inkinga 'yokukhohlisa abalandeli' igcwele inqwaba yezinkundla zokuxhumana. Thatha isibonelo umgqugquzeli onamakhulu ezinkulungwane zabalandeli. Noma kunjalo, ukubandakanyeka kokuthunyelwe kwabo kuphansi, kungashayi neze amadijithi amathathu. Okuvame ukwenzeka ezimeni ezinjengalezi ukuthi umgqugquzeli uthenge abalandeli babo. Ngemuva kwakho konke, ngamasayithi afana ne-Social Envy ne-DILikes.com, konke okudingekayo akukho lutho ngaphandle kwenombolo yekhadi lesikweletu ukuthenga i ibutho lama-bots kunoma iyiphi inkundla yezokuxhumana. Futhi ngamathuluzi amaningi ezokuxhumana nabantu aklanyelwe ukulandelela impumelelo kuphela ngokususelwa kumamethrikhi afana nokubalwa kwabalandeli, lokhu 'kukhwabanisa' kungavame ukutholakala ngemikhiqizo. Lokhu kungashiya imikhiqizo ididekile, ingaqiniseki ukuthi kungani lokho okubukeka kungumkhankaso othembisayo wabathonya kugcine kwehlulekile.
Ikusasa le-ROI elinomthelela lingakhiwa yi-blockchain, ubuchwepheshe bungakwazi ukuhlinzeka ngokusobala okukhulu kwemikhiqizo efuna ukuqinisekisa abagqugquzeli futhi iqinisekise ukubuya kwabo ekutshalweni kwemali. Ngomqondo ofanayo njengabathonya abenza ithokheni lokuqukethwe kwabo, ama-brand angabonisa ukuthengiselana kwabo nabadali bokuqukethwe. Isibonelo, imikhiqizo ingaqinisekisa ukuthi izibalo ezisemqoka zomgqugquzeli, imininingwane ngedumela labo ngokususelwa ekusebenzeni kwangaphambilini, kanye nenani elilinganisiwe lobambiswano livalelwe kwizivumelwano ezihlakaniphile okuvunyelwene ngazo ngaphambi komkhankaso, ngokushintshana okusobala nokuphephile okuthembisa okuningi impumelelo yomkhankaso. Ngokwengeziwe, ekuqedeni abalamuli abangadingekile, i-blockchain ingasiza nokunciphisa imali eyengeziwe yabaphakathi nokunciphisa izindleko zokumaketha emnothweni lapho kunciphisa isabelomali kuyanda.
Umsele ophakathi Kwemihlaba Yabalandeli Nabadali
Ezweni ledijithali elibuswa ukwaziswa okungelona iqiniso, abagqugquzeli bathole isisekelo esiqinile uma kukhulunywa ngokuba yizwi eligunyazayo kungaba ukukhuthaza uhlobo lomkhiqizo abaluthandayo noma ukukhuluma ngodaba olusondele enhliziyweni yabo. Ukufinyeleleka kanye nomthelela wabathonya emphakathini akunakwa 41 amaphesenti wabathengi abathi abathonya kumele basebenzise amapulatifomu abo kahle. Ngakolunye uhlangothi, amaphesenti angama-55 wabakhangisi banomuzwa wokuthi bazokuqapha ukusebenza nabathonya abakhuluma kakhulu ngezinkinga zomphakathi nezepolitiki. Lokhu kushuba phakathi kwama-brand nabashushisi kusho ukuthi kunesidingo sabathonya ukwenza ibhalansi phakathi kokuzilawula ukuvikela isithunzi somkhiqizo nokuphendula emphakathini wabo nakumphakathi jikelele.
Kodwa-ke, kuthiwani uma umgqugquzeli ethatha isinqumo sokukhuluma ngenhloso abakholelwa kuyo ephikisana nemithetho yomkhiqizo? Noma kuthiwani uma umgqugquzeli efuna ukuxhumana kangcono futhi akhe ubuhlobo obuseduze nomlandeli wakhe? Yilapho inethiwekhi ye-blockchain esetshenzisiwe ingangena ukuvimba umhlaba wabalandeli nabadali, isuse umuntu ophakathi nendawo - owamapulatifomu noma imikhiqizo - kanye nesidingo sokulinganiselwa kokuqukethwe okweqile. Nge-blockchain, abadali bokuqukethwe abazuzi nje kuphela ukuzimela kwezimpahla zabo kepha bathola nokufinyelela emphakathini wabo, okubandakanya ukuzibandakanya okukhulu nabalandeli. Isibonelo, ngamathokheni abo endabuko ku-blockchain, abagqugquzeli bazokwazi ukuvuza ngaphandle komthungo futhi bakhuthaze abalandeli babo ngqo. Ngokufanayo, umphakathi wabalandeli ungaba nezwi ezinhlotsheni zokuqukethwe ongathanda ukukubona, okuqhubeka nokukhuthaza izinga elijulile lokuzibandakanya phakathi komdali nomlandeli.
Ngaphandle kwabadali, amapulatifomu awanamandla, futhi ama-brand angahlala ezithunzini. Ekucabangeni kabusha umnotho onomthelela omuhle kubo bobabili abadali bokuqukethwe nemikhiqizo, kudingeka ukuthi kube namandla amakhulu futhi i-blockchain ingabamba ukhiye ekusaseni elinamandla lokukhangisa elinamandla - elisobala, elizimele nelinomvuzo.
Tags: blockchainAbadalifansumthelelaukumaketha kwamathonyaukwenza imaliukwenza imaliuphawuuphawuamathokheni
UMat Dyer uyiNhloko Yezokuthengisa Nezentengiso kwa Zilliga, lapho ezosebenza khona kuzo zonke izingxenye zeCommercial Technology and Marketing ukuze angene kumakhasimende amaningi asezinkampanini ezinsizakalweni zikaZilliqa zeBaaS. UMat uletha iminyaka engaphezu kwengu-18 yobungoti bebhizinisi kusuka kuzo zombili izindlela zokuthengisa nezokuya emakethe.